Looks Nepal विचार – Looks Nepal
सम्झना हुमागाई, काभ्रे ।काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा ६ स्थित बाँसघारी बस्ने पवित्रा भुर्तेल कुनै समय जिल्लामा सक्रियरुपमा पत्रकारिता गर्ने महिलाको रुपमा परिचित थिइन् । २०६१ सालको अन्त्यतिर काभ्रेबाट मोफसलको पत्रकारिता थालेकी उनले ७ वर्षसम्म सक्रियरुपमा काम गरिन् । जिल्लास्थित सञ्जीवनी साप्ताहिकबाट काम
Mar, 11, 2021	looksnepal
आज महाशिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरूको भीड लागेको छ । हिन्दुहरूको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ मन्दिरलाई मानिदै आएको छ । यो मन्दिरमा बिशेष गरेर बालाचर्तुदशी र शिवरात्रिमा मेला लाग्ने गर्छ । आजको दिन छिमेकि देश भारत लगायत अन्य ठाउँबाट समेत पशुपतिनाथमन्दिरमा
डा. धर्मराज उपाध्याय प्रचण्ड माधव भन्दा ओली चर्तुर र शक्तिशाली छन । ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आधार अझै बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि ओली उर्जावान नै छन । उनमा कुनै निराशको संकेत छैन । राजनीति भनेको नै उतार चढाव
डा. धर्मराज उपाध्याय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम लाई खारेज गर्दै पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएको छ । अहिले नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । दम्भ एवं अहंकारको राजनीति
Feb, 24, 2021	looksnepal
डा. धर्मराज उपाध्याय अन्ततः संसद पुनस्थापना भएरै छाड्यो । बर्तमान संकटको निकास भनेको संसद पुनस्थापना हो भनेर म बारम्वार बिषय वस्तु उठाउँदै आफना बिचार राख्दै आएको सर्वबिदितै छ । अव मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधान भएको छ । मुलुक